မတျ 19, 2019 – Healthy Life Journal
မတော်တဆ ထိခိုက်မှုကြောင့် ခေါင်းထိသွားတယ် . . .
မေး. ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ ရက်ကျော်က ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ဆိုင်ကယ်နဲ့ ကားတိုက်မိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းမှာ ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ပါပေမယ့် အံလွဲနေတော့ ခေါင်းနည်းနည်း ထိသွားပါတယ်။ ဖြစ်ကာစမှာ နားရွက်ထဲက သွေးတွေ ထွက်လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ မန္တလေးက – – – ဆေးခန်းကို...
ဆေးလိပ်သောက်သူ၏ အဆုတ်သန့်စင်စေမည့် ဆေးဖက်ဝင်အရည်တစ်မျိုးကို လေ့လာသူတို့မျှဝေ
၊ ကိုထက် ၊ ဆေးလိပ်သောက်တာကြောင့် အဆုတ်ထိခိုက်မှုမဖြစ်အောင် ဆေးလိပ်ဖြတ်တာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပေမယ့် ဆေးလိပ်မဖြတ်နိုင်သေးသူတွေအတွက် အဆုတ်သန့်စင်စေမယ့် ဆေးဖက်ဝင်အရည်တစ်မျိုးကို လေ့လာသူတွေက မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ အဆုတ်သန့်စင်စေမယ့် ဆေးဖက်ဝင်အရည်မှာ ချင်း(ဂျင်း)၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဆနွင်းမှုန့်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ရေတစ်လီတာ၊ သဘာဝအချို (စတီးဗီးယားအရွက်နဲ့လုပ်တဲ့ သကြား)နဲ့...